Jornaya Firfircoon: Kormeerka Suuqa iyo Aragtida Habdhaqanka ee Iibsashada Nolosha Weyn | Martech Zone
Jornaya Firfircoon: Kormeerka Suuqa iyo Aragtida Habdhaqanka ee Iibsashada Nolosha Weyn
Jornaya waa a adeeg-ahaan-adeeg ahaan shirkad leh aragti ka badan 350 milyan oo safar macaamiisha iibsiga bil kasta ah oo ka shaqeeya suuqyada halkaas oo macaamiisha ay maalgashadaan waqti muhiim ah cilmi baaris, falanqeyn, iyo isbarbar dhig xulashooyinka ku saabsan iibsashada nolosha weyn (MLP)
Jornaya Activate waxay bixisaa kaliya kormeerka suuqa ka socda iyo aragtiyaha fikradaha akhlaaqda loogu talagalay iibsiga nolosha-weyn suuqleyda baabuurta, waxbarashada, caymiska, iyo moorgeejka.
Suuqleyda ayaa hadda heli kara tilmaamayaasha ugu horreeya ee ujeedka iibsadaha, iyagoo ogaanaya goorta ay macaamiishooda iyo rajooyinkoodu ku jiraan suuqa wax soo saar ama adeeg ay bixiyaan ama haddii ay ku jiraan safar is bar bar socda.
Jornaya Activate waxay u suurta galisaa suuqleyda inay xoojiyaan istiraatiijiyadda ololaha, hagaajinta kaqeybgalka, iyo gaarsiinta khibrad macmiil oo kafiican haynta, iibsashada, iyo barnaamijyada suuqgeynta iskutallaabta. Marka la aqoonsado calaamadaha ujeeddada hore ee dabeecadda, suuqlayntu waxay leeyihiin isdhexgal xariifsan oo ammaan ah oo kordhiya iibsashada, iibinta, iyo heerarka haynta.
Sidee Jornaya Firfircoon u Shaqeeyaa
Jornaya wuxuu leeyahay iskaashi lahaansho ganacsi iyo tikniyoolajiyad kumanaan isbarbardhig ah websaydhada wax iibsiga iyo ilaha xogta habdhaqanka. Xalka firfircoonaanta wuxuu soosaaraa oo bixiyaa macluumaad aamin ah oo maalinle ah oo waafaqsan iyo aragti ku saabsan macaamiisha ku saleysan Mareykanka 'habdhaqanka suuqa.
Firfircoonida xogta waxay si fudud isuguxidhaa xirmooyinka imika jira ee Jornaya's Integrations Hub. Tani waxay u oggolaaneysaa suuqleyda inay si otomaatig ah u helaan marin-u-helidda xogta Jornaya maalin kasta si toos ah gudaha CRM, CDP, ESP, wicitaan, ama barnaamij kasta oo fulin suuq-geyn la doonayo. Firfircoonida isku-darka ka badan 100 CRM iyo barnaamijyada suuqgeynta oo ay ku jiraan Salesforce, Eloqua, Marketo, HubSpot, iyo Velocify.
Sidee firfircooni u horseedaa guusha
Jornaya Firfircoon waxay ka caawisaa suuqleyda inay fahmaan halka ay macaamiishoodu iyo rajooyinkoodu ku jiraan safarkooda iibsashada si ay u waafajiyaan gaadhista ugu habboon uguna siiyaan khibrad macmiil weyn. Jornaya Guusha Macaamiisha iyo Kooxaha Taageerada waxay la socdaan macmiilka talaabo kasta oo jidka loo maro. Laga soo bilaabo iskudhafka markabka ilaa la-tashiga dhaqamada iyo istaraatiijiyadda ugu fiican, Jornaya wuxuu u joogaa inuu ka caawiyo wadista guusha socota.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Jornaya Activate
Sidee Jornaya u ilaaliyaa Asturnaanta Macaamiisha
Qarsoodiga macmiilka ayaa ugu muhiimsan Jornaya. Firfircoonida ayaa uruurisa dabeecado aan lagaran, waxay soosaaraan aragtiyo, waxayna kuugu gudbiyaan xirmooyin xog fudud laakiin awood leh Xalka firfircoonaanta Jornaya waligiis kuma lug laha macluumaad macaamiil ah. Ma jiro macluumaad shakhsiyan lagu aqoonsan karo (PII) oo jooga, la kaydiyo, ama la wadaago. Jornaya wuxuu kaliya ka shaqeeyaa diiwaanada aan la aqoonsan karin.
Tags: Safarka macaamiishajornayaJornaya dhaqaajiiibsiga nolosha-weynmlp